SomaliTalk.com » Mahiga oo Warqaddii Koowaad u soo diray Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool (1)
Billowga horeba waxaan jeclahay inaad ogaataan in arrimaha muhimmadda ii leh ay yihiin dibuheshiisiinta taasoo salka ku haysa wadahadal, ka wada qaybgal siyaasadeed, amaanka guud, wax ka qabashada arrimaha baniaadanimada iyo dibudhiska. Arrimahan muhimmada leh waa kuwo iskaabaya. Xafiiskeyga wuxuu si joogta ah ugu taageerayaa uguna dhiirrigelinayaa Dowladda Federaalka Ku Mel Gaarka waddada ay hayso iyo dhameystirka waajibaadka muhimadda leh ka hor intaan la gaarin dhammaadka muddadeeda oo ku eg bisha Agoosto ee 2011.
Bishii hore ayaa iyana tallaabo muhim ah laga qaaday qoritaanka Dastuurka, taasoo ka mid ah waajibaadka ugu muhimsan ee loo baahanyahay in Dowladda KMG ay fuliso xilliga kalaguurka. Qabyo qoraal dastuurka cusub ayaa dhowaan la soo bandhigi doonaa. Arrintan waxaa la kowsanayaa habkii dadweynaha lagu bari lahaa dastuurka isla markaasna lagu la tashan lahaa inta suurtogalha. Sidaas darteed, dadweynaha Soomaaliyeed, ha joogeen dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay aragtidooda ka soo dhiibtaan qabyo qoraalka dastuurka. Waxaa la filayaa in qabyo qoraalka kowaad ee dastuurka la soo gabagabeeyo dhammaadka sannadkan. Tani waa fursan aan wax la mid ah lahayn ee ay ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkooda ku hananayaan.
Waxaa iga go’an inaan u hawlgalo sidii Soomaaliya loogu heli lahaa nabad iyo xasillooni, waxaana hawsha ka sii wadayaa halkii uu hawsha ku dhaafay ergeygii iga horeeeyay si aan u abaabulo bulshada caalamka taageero hor lehna ugu helo Soomaaliya. Idinkoo kaashanaya kuwa taageersan geeddisocodka nabadda, ayaa dadkiina qurbajoogta ahi waxaad xaqiijin kartaan in rajada laga leeyahay nabadda aad ka dhabeyn kartaan, taasoo keenaysa in la helo amni iyo isbeddel wanaagsan oo lagu sameeyo xaaladda dadka Soomaaliyeed ee waddanka ku dhibtoon. Fursa kasta oo ay keenaan kuwa taageera geeddisocodka nabadda waa laga faa’iideystaa si Soomaaliya ay ugu soo noqoto meeshii kaga jirtay dowladaha adduunka. Waxaan rumeysanahay in qurbajoogta Soomaaliyeed ay yihiin, ahaan doonaanna, cudud aan laga maarmin si loo gaaro himilooyinka la tiigsanayo.
Zenawi says soldiers may return to Mogadishu
3 Jawaabood " Mahiga oo Warqaddii Koowaad u soo diray Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool (1) "
kaare cune says:
Saturday, August 14, 2010 at 11:14 am
waxay soomaalidu tidhaahdaa meel aar ka kacay atoor fadhiisay waxaan leeyahay ninkan mahigaan , sxb waad wareeraysaa kii kaa horeeyay ee walad cabdalla oo ahaa nin kaa libaaxsan (muslim) ayaa somalia wax ka qaban kariwaayay mise waa adiga oo adoon ladhoofsanjiray ah.
sxb godane ayaa wadankan somalia ka taliya isagaana katalin doonaa insha aallah.
Thursday, August 12, 2010 at 3:52 pm
aniga kamaal waxaan dhihi lahaa ragii soomaaliyeed waajibaadkooda ma ka soo baxeen misa waxaa ku jirtaan day dream. dabcan sanaawi iyo waxa asaga lamida waa la ogyahay ujeedadooda, lakiin anigu waxa aan garan waayay ragga soomaali oo rabo in wadankii nabad ka dhacdo ayadoo aysan far dhaqaajin wadamo shisheeyana ku raaxaysanaya. sida aad lasoco tid maxaa ragga siyaasada isku haya oo isku masaajidka ahaa isku sheikha ahaa isku qaarijiyaan? ayagana caqligooda ma sanaaawi baa gatay. gartay kuwa reer galbeedka la socdee, waxa aaminsanahay in maanta ragga soomaali ay mid walbaa u ordayo xukun jacayl uma naxaan dal, dad, iyo duunyotoona. waxaa aamin sanahay hadii soomali wadankooda ku noqdaan, fargalinta shisheeya ka dheeraadaan, iyo hunguri jacayl xukunka meel iska dhigaan in soomaaliya ay xasililahayd.
Thursday, August 12, 2010 at 12:11 pm
Mr:Augustine p. mAHIGA read thsi frist..
Addis Ababa – Ethiopia said on Wednesday that it would send its troops back into Somalia in the unlikely event it was called on to evacuate African peacekeepers in the nation battling Islamist insurgents.
Mr: augustine, waxaan u maleenayaa inaadan somali aqoon fiican u laheen oo aad mushahar ku qadato magacooda dhintay lakiin waxaan kuu sheegayaa in somaliya waxa ay ka dagi waysay ay tahay Ethopia , adna aad u shaqayso danaha ethopia, somaliyana laga ilaaliyo inay geeska africa ka noqoto the lion of africa…
Mr:augustine, hadaad aragtay Rag somali ah oo sida sheekh shariif oo aan laheen damiir ay wadankooda wax ugu qabtaan inay ku tuugsadaan somali ayaa argagixiso joogtaa si ay lacag ugu qataan wadamada doonaya inay somaliya ahaato magac ee aysan wadan noqona sida ethopia ay noogu goodiso inay somaliya soo galayso..
Melez zanaawi maxaad somaliya u soo gali waysay intii uusan civil warka dhacin? maanta oo somali intii ugu foosha iyo caqliga xumeed ay magaceeda ku tuugsadaan miyaad mooday inay somaliya dhimatay…
Somali rag munaafiqiin ah ayaa ilaahay gacanta u galshay maalin uuna ilaahay gacantooda wuu naga saari donaa ee melez zanaawi ayaad waardiyaysaa ee somali wax u dan ah meesha uma joogtid ee waraaq danbe hanoo soo qorin adoo melez zanaawi wardiyaynaaya si uu somaliya u qaso…
Mr: augustine, ma ogtahay dhulka hada somaliya laga soo weeraro inay tahay dhulka ethopia ay maamusho maxaad u oran ladahay ethopia leave somali people and thierland alone? hadaad run sheegayso wixii warlod qabiil ku qaraaban jiray waxay ku xaraan xaduuda u dhexaysa ethopia iyo somaliya waana meesha laga dumiyay qarankii somaliyeed hadaanad ethopia u shaqeen melez uraaye ma dhaheen si cad markaan doono ayaan somaliya galayaa…..adna waxaad noo soo qoraysaa waraaq intaad warqada somali u soo qori laheed melez zanaawi u qor…..ileen asagaad u shaqaysaaye…